Boruu Barraaqaa: Sabboonummaan Sabaan Boonuu Dha Moo Lagaan Boonuu Dha?
Posted: Fulbaana/September 17, 2014 · Finfinne Tribune | Gadaa.com | Comments (13)
Viidiyoo gaafa Fulbaana 14, 2014 maqaa Obbo Daani’eel Dafaatiin Ayyaantuu.com irratti maxxanfame daaw’adhee irribni na qabuu dide. Viidiyoon sun gaaffii danuu sammuu koo keessatti uume. Gaaffiilee kana tuffadhee callisee ciisuuf yaalee naaf hin taane. Eeboo qeeqaa sammuun koo natti luqqifate jalaa baqaadhee eessan gaha? Kanaafuu dhaamsa gabaabduu tana barreessuufan dirqame.
Duraan dursee dhaamsa kana kanin barreessu maqaa kiyya Boruu Barraaqaa jedhuun mataa koo qofa bakka bu’ee tahuun hunda birattuu naaf haa beekamu. Duraanis akka Boruu Barraaqaatti barreessaan ture, ammas nan barreessa, borus hangan fiigicha koo fixadhutti callisuu danda’a natti hin fakkaatu.
Dhimma kaaneefitti haa seennu. Komiin Obbo Daani’eel akka bokkaa Hagayyaatti Dr. Mararaa irratti roobse kan yeroo isaa eeggate tahee natti hin mul’anne. Dr. Mararaa fi namoonni hagoon biroon bara 1990oota keessa gaazeexaa Urjii irratti wanni walitti deddeebisaa turan amma yeroo of duuba deebinee yaadannu akkaan qaanfachiisaa ture. Sabboonummaan Oromoo bara sanaa akka baay’eetti san fakkaataa ture. Keessumattuu akka Oromoo Dhihaa fi Oromoo Giddugalaatti wal afoo dhaabbachuun, amantiidhaan wal tuquun, maqaa wal balleessuun, walitti dhaadachuun mallattoo “hayyummaa” barasii godhamee akka laalamaa ture umrii joollummaatiinis tahu hordofaan ture.
Jechoonni Dr. Mararaa bara saniis sabboontota Oromoo danuu akka aarse nan yaadadha. Har’as warri yaadatee aaru danuu tahuu danda’a. An garuu waan kaleessaa yaaannee kan walitti aarru yoo tahe, eenyumtuu qeeqa jalaa hin bahu waan taheef seenaa dabre cufnee isa egeree keenyaa irratti fuulleffachuutu nu baasa jedheen amana. Badii kaleessa walii keenya gidduutti tahe of duuba deebinee lakkoofna yoo jenne keessaa hin baanu. Siyaasaa fi qabsoo haqaaf itti jirru kanas tapha joollee nu jalaa fakkeessa.
Jechoota Obbo Dani’eel keessaa kan natti dhagahmu tokko tokko irratti osoo waa hin jedhin dabruuf nan rakkadha. Obbo Daani’eel wayta Dr. Mararaa qeequ dubbii Jaal Baaroo Tumsaa kaase. Du’a jaala qabsoo hangafa kanaa irratti bara 1990oota keessa waan Dr. Mararaan roga qabatee dubbate nan balaaleffadha. Dhugaan jiru garuu, Jaal Baaroon (akkuma Obbo Daani’eel jedhe) kutaa itti dhalateef osoo hin taane Oromoof du’e. Kana immoo kan nutti himuu qabu namoota akka Obbo Daani’eel kan dhaloota kutaatiin Jaal Baarootti dhihoo tahan tahuu qaba jedhee hin amanu. Yeroo Daani’eel “Ilmaan Baaroo nuun jette” jedhee kutaa tahe tokko bakka bu’ee falmu kan faallaa kanaan yakkamus akka kutaatti dhaabbatee akka falmuuf kakaasuu taha. Akkasitti wal waamuu fi quba walitti qabuun dhufnaan bakka itti dhaabbatu hin qabu. Kanaafuu ani osoon Obbo Daani’eel tahee gaaffii sana akkasitti dhiiga danfee, hidda yaasee, sagalee dheekkamsaatiin Dr. Mararaatti hin dhiheessu. Sa’aa sanatti dhiiga Dr. Mararaa keessattis maaltu akka dhagahamuu danda’u herreguutu narraa eegama waan taheef.
Baaroon Oromoo ture. Oromummaaf du’e. Kanaafuu Oromoon inni Bahaas Baaroof falma. Inni kibbaas, inn kaabaas, inni giddu galeessaas Baaroo qabsaayaa hangafa saba isaa godhatee kabaja, yaadata. Maqaan Baaroo akka malee yoo tuqamu Oromoon seenaa qabsoo isaa beeku hundi dheekkamuu qaba. Obbo Daani’eelii fi namoota kutaa Obbo Baaroon itti dhalatetti dhalatan qofa addatti wanni dheekkamsiisu hin jiru. Waldhibdee fokkattuu gaafas jaallan gidduutti dhalattee balaa du’a Jaal Baaroo fi Jaal Badhoo mudde yeroo yaadannu, har’a kutaadhaan quba walitti qabanii wal abaaruu caalaa wanni qaanfachiisaan hin jiru. Seenaa sana qotaa ooluun faayidaan isaa maal akka tahe naaf hin galu. Summiin dubbii kana irraa maddite har’a obboleeyyan keenya kutaalee lamaan kana gidduutti hidda babal’ifattee yeroo qoccolloo wal gidduutti dhalchitu bakka hedduutti argee taajjabeera. Guyyaa sana kan wal sababe namoota dhunfaa ti. Kutaaleetu akka akka kutaatti bahanii wal lolan miti. Namoota guyyaa sana wal sababan bakka dhaloota isaanii ilaalanii waggaa soddoma afurtama booda har’a kutaadhaan quba walitti qabuun sabboonummaan keenya har’ayyuu qacalee tahuu isaa agarsiisa. Ulfina tokkummaa Oromoo isa salphina jalaa nu baasuu saniif osoo hin taane ulfina kutaa itti dhalanneetiif waardiyyaa dhaabbachuu dursuu keenya mul’isa.
Dr. Mararaan bar tokkotti diinota Oromoo waiin dhaabbatee sabboontota dhugaa irratti dhagaa darbaa ture tahuu danda’a. Har’a garuu achi hin jiru. Dhalli namaa barataas tahu wallaalaa, bara jireenya isaa keessatti numa dogoggora. Gariin dogoggoree achumaan hafa. Gariin dogoggora isaa sirreeffatee eebbifama. Dr. Mararaan warra dogoggora ofii sirreeffatee dhaabbii tolfatu keessatti laalama. Kanaafuu kabajaatu malaaf malee badii waggaa digdama duraatiin ammas hawaasa keessatti abaaramuu fi salphifamuun hin toluuf. Ulfina walii kennuu barachuu qabna. Akka dhunfaatti jibba wal irraa qabna taanaan akkuma dhunfaatti fixachuu dha malee, rakkoo dhunfaa sana gara ummataatti (public) fidnee maqaa wal balleessuun jabina miti. Obbo Daani’eel irraa wantin arge kana.
Viidiyoon Obbo Daani’eel wayta kanatti bifa kanaan qindaawee dhihaachuun faayidaan isaa maal akka tahe anaafis ifaa miti. Yaa Mararaan maa dogoggora keessatti hafuu diddee mooraa Oromootti as deebite jechuu dha moo maali? Oromoo keenya isa OPDO keessa jiruunuu saba keessanitti deebi’aa jechaa jirra. Waggaa 23 guutuu waywaannee ofitti waamaa jirra. Mararaan ilmi Oromoo kaleessa dogoggorus dogoggoruu baatus karaa itti fakkaateen Oromumaaf dhaabbataa ture. Akki itti Dr. Mararaan fa’aa jaaramanii fi dhaabbatan Oromoof faayidaa fideera moo hin fidneen dubbii biraa ti. Sun mata duree biroo keessatti laalamuu danda’a. Amma gaaffiin ka’uun irra ture (kaasuun barbaachisaa tahee yoo argameef), “Yaa Mararaa keenya, kaleessa akkas akkas jettee dogoggoraa turte, har’a garuu as deebite fakkaataa, yaada kee kaleessa afaanii si bahe sana amma yoo yaadattu maaltu sitti dhagahama?” gaaffii jettu tahuutu irra ture jedheen amana.
Viidiyoo Obbo Daani’eel wanni olola jechisiisu kan biraa, dhaamsa maayyii irratti dabree dha. Oromiyaa republika taate arguuf hawwii qabaachuun Obbo Daani’eel gaarii dha. Ammoo, sabboontota Oromoo furmaanni biraa itti mul’atuufis mirga isaanii eeguu fi wal kabajuu barbaachisa. Obbo Daani’eel biyya demokraasiin itti dagaage keessa akka jiraatan quban qaba. Biyyoota akkasii irraa wanni dhaaluu qabnu wal dandeettii akkasii tahuu qaba. Ani Oromiyaa walabattin amana yoo tahe hayyoota saba kiyyaa warra falli biraa itti mul’atu yaadaan mormuun mirga kooti. Abaaruu fi salphisuun garuu narraa hin eegamu. Fagoo dhaquu dhiifnee Scotland kan torbaan kana keessa mirga hiree murteeffataa jirtu irraa waan guddaa barachuu qabna. Hanga wayta barruun kun qophaawuutti sagalee 49 fi 51 wal dursaa jiran. Warri Scotland walabtittii fo’atus tahee warri UK waiin jiraachuu deeggaru hundinuu ilmaan Scotlandi. Hundinuu wal malee waa hin qabani. Hundinuu sabboonummaa Scotland qaban. Garuu dhimma bu’aa siyaasaa irratti murtee kam nuu wayya jedhanii adda bahan. Dhimmi Scotland fi dhimmi Oromiyaa fagoo wal gata. Kun beekamaa dha. Garuu wal dandeettii yaada ummataa agarsiisuuf akka fakkeenyaatti waan hin laalamneef hin qabu. Qaroomina akkasii irraa waa dhaaluu qabna. Duudaadhuma waggaa digdama soddoma biyya faranjii teenyee bilchinaa fi gara bal’ina faranjootaa irraa hin barannu taanaan, lammii keenya isa baadiyyaa Oromiyaa keessatti wallaalumaan marfamee marga dheedaa fi eela bishaanii irratti wal dhabee dhiiga wal dhangalaasu irraa maaliin adda taana? Maal barannee wal barsiifanna? Nuti warri hayyuu ofiin jennu hegeree Oromiyaa ilaachisee yaade fedhe qabaachuu dandeenya. Kan murteeeffatu garuu ummata. Dr. Mararaan Federaalism dhugaa keessatti rakkoon Oromoo furama jedhee yoo amane mirga isaa ti. Namoonni yaada kanatti walii galanis isa deeggaruuf akkasuma mirga qabaatu. Obbo Daani’eel dhaaba siyaasaa Oromoo tokko kan hogganan tahanii yoo walabummaa Oromiyaaf lallaban akkasuma mirga qabu. Ummanni kanatti amanus mirgi isaa eegamuu qaba. Ummanni Oromoo wayyabni garuu maal barbaada kan jedhutu yaada lamaan walitti araarsa waan taheef wanni wal dhabamuu fi wal arrabsaniif hin jirtu.
Kan biraa wanni caalaatti na gaddisiisu, yaada namoonni danuun viidiyoo sana irratti kennatani. Baay’een namoota keenyaa ammas akkuma kutaatti dhaabbatanii nama kutaa isaanii tahe deeggaruudhaan yaada yoo darbatan mul’achuun itti fufeera. Kana irraa guddachuu dadhabne. An yoon Wallaggatti dhaladhe nama dhalataa kutaa kiyyaatiin yoo waa jedhame dafee arraba qaradhee gadi bahuun sabboonummaa osoo hin taane gandummaa dha. Yoon Shawaatti dhaladhee namni dhalataa kutaa kiyyaa tahe tokko qeeqamu taf jedhee ol ka’ee nama sanaaf dubbachuunis akkasuma. Hawaasni keenya qaroomina siyaasaa agarsiisaa deemuutu irraa eegama. Nama tokko yoo deeggarrus tahee yoo balaaleffannu kutaa dhaloota isaa, yookiis amantii isaa irraa haajaa qabaachuu hin qabnu. Kutaadhaanis tahee amantiidhaan ana waliin tokko tahees ilaalchi isaa na miidhuu ni danda’a jedhanii yaaduu barbaachisa. Kutaa yookiin amantiidhaan tokko tahuu bira kutee yoo obboleessa kiyya tahe illee, ilaalchaan wal madaaluu qofa aadeffachuutu mallattoo guddina hegeree ti. Hanga dhibdee kana fakkaatu keessaa baanutti “tokkummaa Oromoo” jennee dubbachuun soba taha.
Wanni nama raaju, jabina diinota keenyaa irraa waa laallee barachuu hanqachuu keenya. Amaara isa kamtu Gojjaamummaa fi Manzummaadhaan quba walitti qabnaan agarre? Eessatti Gondarummaa fi Saayintummaadhaan wal dhibanii tokkummaa Amaarummaa isaanii dadhabsiifnaan dhageenyee beeyna? Tigirootas tahu warri heddumminaan TPLF keessatti aangoo qabu joollee Adwaa ti haa jedhaman malee, akka Tigireetti jabaatanii waliin dhaabbachuu isaanii malee kutaadhaan wal dhabanii tokkummaa sabummaa isaanii irratti balaa isaan dhaqqabsiisan arginee hin beeynu. Olola siyaasaatiif jecha “olaantummaa warra Adwa” haa jedhamuyyu malee, gandummaan qabatamaatti mul’atee tokkummaa hawaasa siyaasaa san qoqqoodee jabina isaanii yoo miidhu hin mul’anne. Achi ceenee warra Ertiraas yoo laalle akka sabaatti wal gidduutti garaagarummaa aadaa, amantii, afaanii fi waan biroo hedduu osoma qabanii akka biyyaatti “Eritrea” jedhanii yoo waliin du’an agarra.
Duuba keenya maali rakkoon? Amma yeroo dhibamnee jirrutti garaa irraa walitti urgoofnee walitti dhangala’uu yoo hin dandeenye gaafa kami? Hayyuu keenya jennu tokko kutaa dhalootaatiin tokko taanee qofaaf deeggaruun, kutaadhaan adda taanee qofaaf jibbuu yookiin balaaleffachuun gaafa kam dhaabbata? Ilaalcha dhihaate tokko madaallee mormuu yookiin deeggaruun hafee “ilaalcha sana eenyu dhiheesse, nama kutaa eessaa ti” gaaffii jedhu dursinee kaanee ejjennoo fudhachuu irraa yoom guddanna? Gaaffiilee kana namuutuu of gaafachuu qaba. Wal sirreessuun of sirreessuu irraa eegala. Akka kutaatti wal barsiisuun, wal gorfachuun, hanqina walii jabinatti jijjiiruuf waliin yaa’uun badii hin qabu. Galaana Oromummaa isa bal’aa keessatti ulaagaa Oromummaa guuttatanii walqixxummaa Oromummaatiin waiin jiraachuuf jecha akkuma walitti dhiheenyaatti wal sirreessaa deemuun gaarii dha. Kana tahuun hafnaan, walitti dhufeenyi lagaa fi amantii galaana Oromummaa guddaa sana gargar jajalisanii corroqatti gadi xiqqeessuu taha. Akkasitti Oromiyaa bifa fedheenuu bultu boruu hogganuu fi qaroomsuun hin danda’amu. Dhuma irratti wannin dhaammadhu, faayidaa tokkummaa diinota keenya Habashoota irraa, miidhaa gosummaa fi xinxaalummaa amantii ammoo firoota keenya Soomaalita irraa HAA BARANNU!
Obbo Boruu, barruunkee armaan olii oromummaaf quuqamuu irraa kaate barreessite waanuma sirrii ta’e dha sirrii. Kun gaaffii hinqabu. Garu jarreen lamaan kanaan waliin madaaltee waan barreessite quufsaa ykn karaa sirrii natti hinfakkaatu. Atis gar tokkotti waan loogde si fakkeessa. Dhugaa jiruu dhoksanii jala darbuuf yaaluun nama hinbaasu. Vidion kun takkaa waan kutaaf amantiin nama qoodu of keessaa hinqabu. Bara dheeraadhaaf kutaadhaan qoodee oromoo ficcisiisaa kanture, har’as kanjiru Dr. keessan kana. Badii isaa irraa baratee gara qabsoo dhugaatti deebi’uu isaaf ragaan maali? Akkasumatti dimshaashumaan fudhachuun nama rakkisa. Badii baleesseef ummata dhiifama gaafatee itti seenee? Adeemsa isaa qajeelfachuu isaaf ragaan mul’ate tokkoyyu hinjiru. Waan beekamus waan jiru natti hinfakkaatu. Garaan waan baay’ee baataatii mee akka argitan hindubbatinaa. Utuma beeknuu hubaa wajjin nyaanna jette sareen. Dhugaan lafa jirtu jirtii. Mee dura isin warrumti kana barreessitan kun oromoo lagaaf ammantiin addaan qooduu irraa of qusadhaa. Of hin argineen raafuu lagatti jedha orommoon. Waan isin itti jirtan hundumtuu bakkee jira. Ummata oromoo jalaa waan dhokate homtuu hinjiru. Wayyaaneef bitamanii ummata oromoo ficcisiisuu kancaalee badiin hinjiru. Akkasuma bara Dargiis ijoollee fakkeenyaf Ambo irratti kan inni ajjeesise seenaan bar tokko gadi baasa. Obbo Daani’eel waayee namicha kanaa waan beeku hunda gadi hinbaafne. Kuniis kanta’eef hojiin namicha kanaa waan oromoo bara baraan akka hin araaramne godhee addaan facaasuuf dhoksuu barbaadeeti. Kan inni dubbate seenaa Dooktarichaa keessaa parsantii tokkollee hinta’u. Kanaaf Hojiin isaa isa habaasuuti habukaattummaa isaaf dhaabbachuu dhiisaa. Asiif achii adeemtee nama hinbasaasin, ummata oromoo biyya keessaa wajjinis walii galuu yaali, biyya keessa kunoo waggaa 23 ol bilisaan akkuma deddeebitu kana warra mana hidhaa jiraniifis falmiiti akka hidhaadhaa hikaman godhi jedhaati gorsaa. Ijoolleen yaroo mana hidhaattis ta’e rasaasa wayyaaneen rebamanii du’an guyyaa tokkollee kafana bittee yookiin saxinii bittee keessa keessee warra isaanii biraan geessee ykn dhaabatte awwaaltee beektaa jedhaa gaafadhaamee. Guyyaa tokko mana murtii ijoollee baratootaaf habukaattoo bittee falmitee beektaa jedhaa gaafadhaamee. Isa darbe dhiifne kan amma hojjetamaa jiruu fi kan gara fuulduraa irraa hadubbannu. Oromoon namni tokko hojii isaatiin saaxilameef addaan hinfaca’u. Ummatni oromoo waan baay’ee keessa darbee waan asga’e jiruuf akkasumas dammaqinsa ga’aa waan qabuuf kanaaf jedhee addaan hinfaca’uutii itti hinrakkatinaa. Gadheen balleessaa ishee yoo itti himan malee irraa waan hindeebineef takka takka itti himamuunis dirqama ta’a. Ergamtuu wayyaanee kan oromoo addaan facaasuuf diyaasporaa dhufe namichuma Mararaa jettanii falmitaniif kana malee Obbo Daniel miti. Mee irra deebi’aatii naamusaan dhageefadhaa. Waanuma sirriitti dhaggeeffataniyyuu natti hinfakkaatu. Jibbuma waan qabdaniif qaawwa ittiin warra …… kana balaalleffanu arganne jettanii ufffff gootanii biyya waliin geessu malee dubbiin isaa waan akkas nama jechisiisu miti. Deggertoota Mararaatiif time ta’uu dide malee Obbo dani’eeliif namichatti dubbachuun time isaati.
Waanta namttich maraattaan Daneil jedhamu dubate (haqissee/diddiige) waan yerroon birraadeeme tokko dhageewfadheni turre. Namttichii kanni inni ykn amoo kanneen gndaissaara dhufani gegeessan yoo hintanee wannuma tokko waan fudhattu hinfakattu. Kanna hubachun barbachissadha.
This is the time when people are trying to overlook all past ill and trying to come together across the board. But people like Daniel can not take anything that is not run by him or his village fellows. It is fine they can go and do it. The Oromo people have seen what his groups can offer.
All they did was serve us failure after failure since 1992. Now it is time they do is accept to go with people where the people want to go or shut up and sit. We can not surrender to their inefficient and good for nothing leadership. They never accept anything except the driving seat, when they are in it they have been sin driving us to eternal failure from which we are trying to recover. Unfortunately here they are spilling there poison. We can not be fooled again, it serves them better to know our stand before it is too late for them
Me waan obbo Danie`l jedhe keessa kan kijjiba ta`e irraa nuuf ibsi. Kan uumata diiguu soba malee dhugan miti.Yoo utuu namni baddii dalaguu ilaalanii bira darban, ammas waan gariin hojjedhe jedhee itti-fufa. Baddii namati himuun dalansuu qabaa? Obbo Dani`el Kan Dr maraara gaaffate, maliif nama kutaa tokko irrati xiyyeeffatee nama kuttaa fi amantiin nama arrabisita jedhe malee maliif kutaa kiyyaa arrabsite hin jenne. Kanaafuu utuu dubbii jallisuu dhiftanii ba`eesa. Dr mararan yoo barreesu sana guyyaa haraa dhufiti hin sene. Warri ammas barreesitan guyyan boru jirti jedhatii eeregaa. Dhugaan ni qallaati malee hin cituu. Karaan soban darban galma nama dhibidii akkuma jedhan sana.
Atis garuu dogogora qabda, eenyu kan hindogogorre yoo jette malee. Namootin viideo sana irratti sagalee isaanii dhiyeessan hunda isaanii beekta moo wallagga fi shawaa tau’u isaanii eessatti beekta? komputera keetu takka takka shawaa shawwaa takka takka wallaagga waalaga sitti urgaayee?
Dhuguma madaa durii saaquun madaa haaraa uumma. Keessumaayyu yaroo ammaa mootummaan shororkeessituu saba keenya fixaaa jirtuti oromoon humnaa fi beekumsa qabu waliti fidee garbummaa of irraa buqisuu malee wayee kanaa haasawuun hinbarbaachisu. Garuu, hammaa warri kana dura balleessaa gugurddaa ummata oromoorrati hojjetan sun (maqaa isaanii atuu beekta) saba oromoo dhiifama gaafataniti Daniel fi qabsaawota biraa kan dhugaa barbaadan qeequn garuu sirrii natti hinfakkaatu.
Barreefama Mararaaan ittiin qeeqamu kana ani argees, dhagayees hinbeeku. Hamman viedo sana agrutti dhuguma kana hojjeta jedhees hinyaadu ture. Otoon walgayii sana keessati hirmaadhee gaafiin koo waan biraa ture (issas qeequu dandeessa):
Yaa Dr, kana dura si’a lama fillanoo wayanee irrati hirmaattanii wayaaneen isin hatteeti, miseenssooni keessan dhumaniiru, hidhamaniiru, hammas hidhaa fi reebamaa jiru. Ilmaan oromoo gaafii mirgaa kaasan deebiin issan argatan rasaaasa akka ta’e argitan. Hamma maal abdattaniitu filannoo 2015 irrati hirmaachuuf murteeffatan? Hirmaanni keessan kun Wayaneedhaaf “legitimacy” kennuu hinta’u?
Dr. Marara should appologies to oromo elits special wallagga Elite. I never ever consider marara as politincian but as street boys talking about politics. So if Boru you say no need to rember the past , know that habeshas are also saying thes same when it comes past history what thier king done to us.
So you better advise marara( street politencian) to appologies for his past statment. Period.
No apology is in order, you have been attacking Dr Mrara by calling all sorts of names simply because he looked at our politics in a pragmatic way that was different from the myopic approach taken by your groups that lead us to failure. Now you still call him names as a street politician while that name clearly describes you and your groups. please leave this man alone.
Keetin Boon Reply
“Horii(Loon) Abbaan gaafa cabse ORMI Ija balleessa” Yaa Oromo quba wolitti qabu dhiifne quba DIINATTI haa qabnu ! wolitti garagaalu dhiifne Diinatti haa garagallu ! dogogora keena Ala baasu dhiifne sabbonumma keena ala baasu qabna ! NAMA KOLFAA TA’U hin qabnu !
boruu galatoom !
Obbo Boruu Baraaqaa Galatoomi waan gaari jeette. ilaa waan amma ati tuttuqxxe kana dhaloon amma ykn dhaloon qubee yoo akka kanaan itti fuffan irra anu jedheen abdadhaa. yoo wara akka Obbo Daani´eel kana horddofuu battan. waan isaan hubatuu qabaan ulfinifi guddin yoo samu oromumma qoofan yaanne taú isaa hubatan inn gandumman hidhamme of tullu boodden isaa salphina akka taée hubatan irra anamma saaf ammoo haala fokkataa amma keesa jiruu kana keesatuu malatoo argaa jirutuu jira. wara akka Obbo Daniéel kana dhaloon haaraan guraa itti laata hin jiran. akumma atuu jeette Dr. maraaraan waan gaarii jedhee jechaa hin jiruu. otuu haayyumma wara bara 1990tamoota irratti bareesa turan san tufatee deebb kenuf dhisa taée akkam gaarii turee, haa taútti inn Oromoof qabsoo oromoo keesatti fooyyaíinasa garsisaa jira. amma illee akka Daani´eel saganteefatee Viidiyoo qophefatee digumsaaf hidhate kaée san Maraaraan akka durani san haadhaa haadhaadhan ddebbisa taée haaga kana caalaa hammata turee, tufatee lafatti haqqe bira darbuun isaa hayyumma foyyaíinsa agarsisuu isaa mulisa.waan yeroo darbbe doggoggora taée ille akumma kanaan fooyyefataa akka demu irra argaa jiraa. wari ammas tutuqani karaa amma irra jiruu kana irra maqisuf tattafatan debbi gahaa waan argatan seehaa. armman boodda hojji akkasi esummatuu hin dalaguu NUTTI OROMOON tokko.OROMOON BAHAA OROMOON DHIHAA OROMOON KAABBA OROMOON KIBAA OROMOON GIDDU GALAA ANAAFG DHIGAA KOOTTI: QABSAAWOON KENYA TAADDASAA BIRUU; BAAROO TUMSAA ELEMOO QILXXU WAAQOO GUUTUU MASTAWOOT; LAAFEE ISSANTIN IJAARAMEE ISSAN ANNAF QAAMMA KOO AMMA ITTI OROMOO OFFIN JEEDHEE ITTIN SOOCHOO`U. isa kana Daani eel irra mooti kan egadhu Baaroon anaf kiyya Badhoon anaaf kiyya, keesumma waan Baaroo fi Badhoo Jidutti ta´ee saan ofifuu nibaasa Daniéli fi fakkatoon summi tokkumma saba oromoo riqichii ololaa gidduutti ittin ciitee naacha akka isaan nyachisuu abdii guutun qaba.
Oromos need cultural revolution. We must abandon the culture of blaming the victim and learn to apologize infront of Abba Gadaas to the people immediately after they become aware of their mistakes, not just close files and pass as if nothing had happened, especially if they aspire to run for public office.
I admit that Dr. Marara’s inappropriate choice of words are nothing compared to crimes of Lencho latta, Nagasso Gidaadaa, Junedin Sado, Kuma Dammakssa, Abbaaduula (not sure if that bull is oromo at all), and the current terrorist puppet and president of oromia, etc. all of whom should face justice one day or another.
But a mistake is a mistake and like the above criminals he failed to apologize this a long time ago. That is why people are worried and grill him decades later and will do so in the future until he does. Who knows if he is not still with that attitude?
I thank Daniel for making me aware of the past behavior of a person I long trusted. Regarding his politics, I don’t blame Dr Marara for being ethiopianist because I was the biggest ethiopianist when I was a child! I did not need any agitation by any group to find out that I was in fact the biggest slave of someone in my own home and I closed that file immediately without needing to apologize to anyone cause I never did any harm to anyone.
That said what Dr. Marara said/wrote decades ago should not lift the heat away from the terrorist wayyanes who are committing genocide our people.
Lami Boru Reply
Kan hedduu na dhibe: Gadaa.com fi Ayyaantuu.com viidiyoo obbo Daani’eel sana bu’aa qaba jedhanii teessoo isaanii irratti maxxanasuu isaaniiti.
Obbo Daani’eel ofitti qaana’uu qaba. He should be ashamed of himself. Hinumaayyuu immoo “Long-time prisoner of conscience” jedhee of ibsuu yaala. Hidhamuun kan ittiin dhaadatan ta’uu qabee? Hidhamuu keetiin dhiisii bu’aa ati saba keef buufte hoo jiraate sanaan dhaadhadhu! Warraaqsa of-irratti gaggeessuu qabda!
Yeroo tokko mana hidhaa wayyaanee Qaallittii keessatti wal-falmnii gidduu keenya ture kunoo:
Gareen tokko “Amma iyyuu qabsoo gaggeessaa jirra” jedha; kaan immoo “Qabsoof wareegamnee jirra” jedha.
Abdi Baalee Reply
Boruu Baraaqa ooliif bultteen tee akkam? fayyaa keetti,barruun atti barreesitt(Nuuf gumaachitti) waan bayyee nama gamachiisu. Baruudhan san keessaa tanautu baayyee nama gamachiisa, tanatu nama gadisiisa tan an jechu takkaleen waan hin jirreef ,hedduu galatooma,siin jedha.
Boruu Baraaqaa !!!ji’oota lammaan darban kan siqunamuu dhabuu kiyyaaf dhiifama sigaafadha. garuu barruudhan atti barreesitu hundaayyu hordoofaan jira itti nuuf jabaadhu.
Gaafii: Jaal boruu ,mee nama saahiba kiyyaa tokkoon wal sibarsiisu?Qaaman akka wal beeyytan nan beekka .garuu dhamaan wal si barsiisuun barbaadhe , innis Obboo Abdalaa sh.kadir jedham mee dhamaan wal baraa .
Akkam Fayyaa Reply
baayee namatti tola gar fuula duraatti waan guddaa akka hojjettan abdiin qaba